UKZN Online Volume: 7 Issue: 32
TATA SCHOLARSHIPS FOR POSTGRADS
NEDBANK INVESTS IN UNITE ENGINEERING STUDENTS
UKZN CENTRE GETS GRANT TO IMPROVE THE LIVES OF INFANTS IN KZN
UKZN LECTURER COMPLETES MONTHS OF RESEARCH IN CANADA
TRANSLATOR "AT WORK" AT CALS
LABOUR SECTOR ANALYSED IN SPECIAL ISSUE OF JOURNAL
PRESTIGIOUS DOCTORAL SCHOLARSHIP AWARDS FOR PHD STUDENT
NEW NON-SURGICAL MALE CIRCUMCISION DEVICE TO BE PILOTED IN SA
UMFUNDI OMDALA WASE-UKZN UBUYISELA EMPHAKATHINI
NEW LANGUAGE LABORATORY FOR HOWARD COLLEGE CAMPUS
UKZN SUPPORTS MEDICAL MALE CIRCUMCISION ON CAMPUSES
EMPHASIS ON “SEXUALITY” AT THIS YEAR’S DIFF
Mnu Mick Goss.
UMnu Mick Goss usebenzise iziqu zakhe zomthetho zase-UKZN njengesisekelo sempumelelo yebhizinisi lakhe lokufuya amahhashi naziqhenyayo ngalo ngokuthi abuyisela emphakathini.
UGoss wathweswa iziqu ze-LLB, ophikweni laseMgungundlovu ngo-1974 kodwa kuthe emva kweminyaka eyi-17 washiya umkhakha wakhe wobummeli ukubhekana-ngqo nebhizinisi lokufuya amahhashi eSummerhill Stud Farm eduze nase Mooi River.
Lolu shintsho olungaka alwenza lwenzeka emva kokuba engumeluleki wezomthetho womnikazi famu – elenza inzuzo engamaphesenti -6.25 njengeholo lomsebenzi awenzayo kwicala elenziwa lokuthenga indawo. ‘ Ulwazi lwami njengommeli lube usizo kakhulu ekwaziseni umphakathi ngebhizinisini. Ngibe nenhlanhla yokufunda ezikoleni ezimbili ezihamba phambili kwezomthetho – i-UKZN kanye neStellenbosch, kusho oka Goss.
‘Abafundisi base-UKZN ngaleso sikhathi babeqavile kakhulu, hhayi kuphela nje kwezemfundo, kodwa nasekucijeni abafundi bebalungisela impilo yangaphandle. Abafundisi babeba nokukhathalela izimpilo zabafundi, lokho kwangihlab’umxhwele kakhulu.’
Namhlanje, iSummerhill iyaqhubeka nokudl’ubhedu ngaphansi kobuholi buka Goss njengoba isithathe izicoco eziyisishiyagalombili ze-South African Champion Breeders.
Njengengxenye yokunothisa umphakathi, ipulazi seliyikhaya labantu abaphakathi kwama-600 kuya kwama-700 abaqashiwe kuleli bhizinisi kanye nendlu yokudlela iHartford House ekhona epulazini.
Baphinde babe nesikole sobuHoli sobunyonincu esifundisa izifundo esithi phecelezi Equine esinabafundi abahamba phambili nasebegogodile kumakilasi ebebewenza. Abafundi sebezuze imifundaze yomhlaba jikelele engama-50 kumapulazi ahamba phambili umhlaba wonke.
Iqembu labadansi base- Summerhill selihleli esicongweni, lilala isibili kanye nokwesithathu ngokulandelana eToyko kanye nase Hong Kong kumncintiswano womhlaba wonke wabadansi besiko lemvelo, ngesikhathi okuka abane bamaZulu abavela kuyo indlu yokudlela eHartford behlonishwe ngemisebenzi yabo abayethule kwenye yemibukiso yokudla eZurich, Prague kanye nase Shanghai.
Ku-Goss, le misebenzi yokuthuthukisa umphakathi iyimizamo yokwenza ngcono izimpilo zabantu abaphons’esivivaneni sempumelelo yepulazi.
‘Ngesikhathi sifika lapha, bekukhona abantu abayisithupha kuphela abasebenzayo kanye namakhono ambalwa kwezamahhashi kanye nokwamukela izivakashi, ukusho nje. Ngokhisimusi odlule sikhokhele amabhonasi angama-350 kubantu abenze imisebenzi encomekayo. Bazinikelile eminyakeni ebinzima, sibakweleta konke esiyikho nesimele khona, kubeka oka-Goss.